ကလေးဆေးခြောက်၏အပြည့်အဝရှိပါတယ်? ထိုဦးနှောက်နှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါငါးအများစုမှာလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်တောင်းဆိုချက်များ - သတင်း Rule
ကလေးဆေးခြောက်၏အပြည့်အဝရှိပါတယ်? ထိုဦးနှောက်နှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါငါးအများစုမှာလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်တောင်းဆိုချက်များ
ဦးနှောက်၏တာနက်နဲသောအရာတခုကိုနေဆဲနေစဉ်, လူသဘောပေါက်ထက်ကျွန်တော်အကြောင်းအများကြီးပိုသိ. သို့သော်, အဲဒီအကြောင်းရာ၌တောင်းဆိုမှုများအချို့ကိုပဲလွင်ပြင်လိုက်တယ်များမှာ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ကလေးဆေးခြောက်၏အပြည့်အဝရှိပါတယ်? ဦးနှောက်နှင့် ပတ်သက်. အဆိုပါငါးအများဆုံးလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်တောင်းဆိုမှုများ” ဒင်းဘားနက်ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 26 ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2016 07.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဇူလိုင်လတွင် 31st 2016, ဤ blog တည်ရှိမှုအတွက်ဖြစ်ရပြီလိမ့်မည် အတိအကျလေးနှစ်. ထိုကာလ၌ဖတ်ရှုဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်းသူလူတိုင်းတစ်ဦးကကြီးမားသောကျေးဇူးတင်စကား (သငျသညျတခုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအရေအတွက်). ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်တိုင်ရှိချင်ပါတယ် သောနေ့၌ အခါသမယအထိမ်းအမှတ်, ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တွင် 31st တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်) တစ်ဦးတနင်္ဂနွေ, ခ) ငါ့မွေးနေ့, ဒါကြောင့်ငါသည်ထိုနေ့၌အလုပ်လုပ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်လျှင်ပင်, မည်သူမဆိုကဖတ်လိုမဖြစ်နိုင်ရဲ့.
သို့သော်, ယနေ့လည်းခြေတစ်လှမ်း အကြှနျုပျ၏စာအုပ်၏အမေရိကန်လွှတ်ပေးရန်ဒီနေရာမှာရီစရာ-မဖြစ်နိုင်-ပေမယ်--ကျနော်တို့-များမှာ. ဘယ်လိုကြောင့်ဒီအမှတ်ရခဲ့?
ငါလေးနှစ်ယခုတစ်ဦး "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်" သိပ္ပံပညာစာရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်, ငါမှ neuroscience တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြရတယ်, တဦးတည်းသောအသွင်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်, မှစ. 2000, ငါသည်ငါ၏ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့စတင်ယခုနှစ်. ထိုကာလများတွင်, ငါ / ဘယ်လိုဦးနှောက်အကျင့်ကိုကျင့် ပတ်သက်. အချို့သောအလေးအနက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတောင်းဆိုမှုများကြုံတွေ့ကြားဖူးတယ်. မကြာခဏဆိုသလိုကပြောသည်ခံရခဲ့ရာဥာဏ်ကိုသာငါ့ကိုခဲ့သည်, ဒါမှမဟုတ်စက္ကူ misinterpreting, အရည်အချင်းကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်မရှိခြင်း. တခါတလေ, အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် ့မီဒီယာချဲ့ကား.
သို့သော်, ဦးနှောက်နှင့် ပတ်သက်. လုပ်ဆိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအထောက်အထားသို့မဟုတ်ထိုသို့ပင်ဆင်ခြင်တုံတရားအခြေခံကိုရှာဖွေငါ့အလိုရှိသမျှကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု thwarts လာသောအခါအခါသမယရှိခဲ့ပွီ, ငါ့ဦးခေါင်းကုပ်ခြစ်ငါ့ကိုချန်နှင့်ငရဲမှလာခဲ့ဘယ်မှာ "အံ့သြ?"ဤတွင်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ကိုထက်ကွန်ပျူတာများကိုစမတ် Are? သူတို့ကဆက်ဆက်တစ်ခါတစ်ရံတူပြုမူ. ဓါတ်ပုံ: H ကို. မာကု Weidman ဓါတ်ပုံပညာ / Alamy
ဦးနှောက်တစ် terabytes သတင်းအချက်အလက်စွမ်းရည်ရှိပါတယ်
ယခင်တုန်းက, သိုလှောင်မှုပမာဏ၏တစ် terabytes လို မယုံနိုင်လောက်အောင်အထင်ကြီးပုံရတယ်ပြီ. ဒါပေမဲ့ Moore က၏တရား ကမှပေးဆောင်ထား. အကြှနျုပျ၏အိမျကို desktop ပေါ်မှာ PC ကိုလက်ရှိရှိပါတယ် 1.5 သိုလှောင်မှုပမာဏအာကာသ၏တီဘီ, နှင့်ခုနစ်နှစ်ကျော်ဟောင်းရဲ့. ငါ့ကိုယ်ပိုင်ရှုပ်ထွေး desktop ပေါ်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်, သတင်းအချက်အလက်စွမ်းရည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ငါ့ကိုထက်ပိုမိုလိမ္မာပါးနပ်?
ထင်ရှားစွာ. တချို့ကခန့်မှန်းလူ့ဦးနှောက်၏စွမ်းရည်မြှင့်တင် 1TB သကဲ့သို့အနိမ့်. အမှတ်တရများတန်ဖိုးရှိတစ်ဦးဘဝသက်တမ်းတစ်ကျြမှောကျခတျေ hard drive ကိုဖြည့်မည်မဟုတ်? ဒါကအလှမ်းဝေးပုံရသည်, အနည်းဆုံးအားတစ်ဦးအလိုအလျောက်အဆင့်မှာ.
သမ္မာတရားကို ပို. မရေမရာဖြစ်ပါသည်. တချို့ကခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအထား အများအပြားကဲ့သို့မြင့်ဦးနှောက်ရဲ့စွမ်းရည် petabytes, မူရင်းအံ့သြစရာခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏. ထိုနှစ်ခုအစွန်းအကြားအထိကအများအပြားခန့်မှန်းချက်ရှိပါတယ်, နှင့်ကျော်လွန်.
ဒီရှုပ်ထွေးတာအတိအကျနှင့် ပတ်သက်. မသေချာမရေရာအတွက်တည်ရှိသည် ဘယ်လိုလဲ သတင်းအချက်အလက်ဦးနှောက်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်လည်း "ဦးနှောက်ကိုကွန်ပျူတာကဲ့သို့ဖြစ်၏" သောမကြာခဏလှညျ့စားအယူအဆအတွက်. နညျးလမျးမြားစှာခုနှစ်တွင် ဒါကြောင့်မဖြစ်, တ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေကိစ္စရပ်များရှုပ်ထွေးနိုင်. ဆဲ, ကျွန်တော်တို့မကြာမီကျွန်တော်တို့ကိုထက်ပိုပြီးအသိဉာဏ်စမတ်ဖုန်းစေခြင်းငှါစဉ်းစားရန်လိုက်တယ်ရဲ့.
ဆက်သွယ်မှုများကိုအမြောက်အမြားကိုအလိုအလျောက်ခေတ်မီဆိုလိုတာ? ဖြစ်နိုင်စရာ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမ. ဓါတ်ပုံ: Jetta Productions / Getty Images
ဒီလိုက်တယ်ပြောဆိုချက်ကိုမကြာခဏပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်. ဒါပေါ့, ထိုသို့ရဲ့ဒဏ်ဍာရီ. တိုင်း connection ကို (synapses) လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာအက်တမ်၏သန်းပေါင်းများစွာ၏ဖန်ဆင်းထားသည်, ဒါကြောင့်ဒီကြေညာချက်ကိုထိထိရောက်ရောက် "စကြဝဠာထဲမှာရှိပါတယ်ထက်ဦးနှောက်ထဲမှာပိုပြီးအက်တမ်ရှိပါတယ်" ဟု. တိုင်းဦးနှောက်ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားအိတ်စကွဝဠာနှင့်ဘယ်သူမှရှိမထားရင်သတိထားမိလိုက်ပါတယ်, ဒီနေလည်းပြောဆိုချက်ကိုဖြစ်ပါသည်.
ဒီ၏အထင်ရှားဆုံးအရင်းအမြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ် ရုပ်ရှင် Amelie. တရားမျှတမှုအတွက်, ကြောင်းရုပ်ရှင်ထဲတွင်ကိုးကားပိုရှိပါတယ်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်သော စကြဝဠာထဲမှာအက်တမ်ထက်ဦးနှောက်ထဲမှာဆက်သွယ်မှုများကို. ဒီပိုနားလည်နိုင်သည်; သောင်းချီအာရုံခံဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏ဖြစ်နိုင်သောပေါင်းစပ်ထရီလီယံရာပူဇော်သက္ကာနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးသိသိသာသာနံပါတ်များကိုမြင်လျှင်စတင်.
ဒါဟာမ ဆိုလို သော်လည်းဘာမှ. ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဦးနှောက်၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးဖျောပွဖို့ရည်ရွယ်င်, သင်မူကားဆန်တစ်လျောက်ပတ်သောအရွယ်အိတ်မှတူညီယုတ္တိဗေဒလျှောက်ထားနိုင်. “There are more possible arrangements of rice ina10kg bag than there are atoms in the universe”. Profound? ငြင်းခုံဖွယ်. Helpful? Not really.
Imagineaglass that you could only fill to 10% of capacity. What would be the point? ဓါတ်ပုံ: Alamy
A lovely idea, but not true. The brain is an intensely hungry organ, using around 20% of our body’s energy just to function normally. Having an organ using copious energy doing mostly nothing is an evolutionary dead end, if nothing else. If we only used 10%, natural selection means we’d only ရှိ ထို 10%. Maybe we are indeed the end result ofaprimate with much larger brains they didn’t use? Pity those poor fools and their basketball-sized-skulls.
ရှိသည်, သို့သော်,ahint of truth to the claim. While we do use all of our brains, we don’t use all of it at once. The way the energy supply of the brain is arranged, our bodies can’t supply enough to increase activity in all of the brain simultaneously, so onlyasmall fraction of it can be “activated” at once.
Would explain why they’re always smiling, I guess. ဓါတ်ပုံ: : D. Hurst/Alamy
One theory, that I came across inapresentation in my student days, is that we’re flooded with natural cannabis when we’re born. ထိုသို့စဉျးစားကွညျ့: you’reavery small, still-forming human and inavery messy and intense sequence of events your universe has just gone fromawarm wet sack toasterile hospital room. That should prove intensely traumatic. But not if you’re “stoned”. Think about it some more: you’re unnaturally relaxed, and inexplicably hungry. Very useful traits inanewborn.
Does this look likeaset of buttocks to you? ထင်ရှားစွာ, it should. ဓါတ်ပုံ: Sarah Lee/the Guardian
This suggests that there’s some evolved trait in the brain that makes men permanently fascinated by breasts. Are theyasign of health? A subconscious implication of fertility, to ensure passage of the genes? သို့မဟုတ်, as one theory I read argues: is it because visible breasts resemble your mother’s buttocks?
That’s correct. One argument is that, foratree climbing primate, the site of your mother’s buttocks in front of you suggests both safety and successful climbing, so isareassuring sight. ထိုကွောငျ့,apreference for keeping your mother’s buttocks in view would beauseful survival trait, one exploited in the evolution of human females with the production of prominent breasts.
Dean Burnett’s debut book is now available in the US. Idiot Brain: what your head is really up to, ကနေတဆင့် W.W. Norton.
27196	4 အပိုဒ်, Blogposts, ဦးနှောက်ကို flapping, Dean Burnett, မီဒီယာ, neuroscience, စိတ္ပညာ, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို, ဗြိတိန်သိပ္ပံ
←6သင်ယုံမှကြည့်ရှုပါရန်ဖူးအနာဂတ်ဖိနပ်ကိုတီထွင် [VIDEO] Samsung ကမိတ်ဆက်က Galaxy Note ကို7သင်သည်ကိုယ်မျက်စိနှင့် Unlock နိုင်သလား phablet →